Mugabe makaipa: White farmer report
This Toronto newspaper has a report on Zim from the standpoint of Roy Bennett...
I am always skeptical about reporters who find heroes in white people when they manage to ignore the many Bantu spokesmen...but it does give some inside information...
...Paradoxically, he sees improvements for Zimbabwe as conditions worsen. Mugabe's only international ally is China; leaders of other African states fear defying Mugabe or his close supporter, South Africa's President Thabo Mbeki.
"It's fair to say everyone in Zimbabwe is waiting until Mugabe (age 81) goes, and then we will return to being a normal country."
Bennett sees foreign aid and the policy of forgiving debts and increasing loans as a formula for expanding -- not curtailing -- corruption and tyranny. With the exception of Norway, Bennett says the West does little to protect human rights or deter despotism in Africa in general, and Zimbabwe in particular....
I was going to lable this a "white bwana" report, but then the white farmers tended to be hard working blokes...it is the "save the animal" types from the Uk and US who irritate me...and get the lable "white bwana"...